Ahoana raha mitarika tsy ara-drariny ny nanoteknolojia sy ny faharanitan-tsaina?
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 13 Jolay 2017	• 8 Comments
Inona no atao hoe fahaizana artifisialy nanotechnology sy mitarika ho amin'ny tsy fahafatesana? Ahoana raha araka ny Ray transhumanists Kurzweil Google sy Michio Kaku (fantatra amin'ny Discovery Channel) mahazo mitovy ary afaka manolo biolojika rehetra eto an-tany sela ao amin'ny vatana amin'ny alalan'ny nanotechnology volen'ny sela ny fototarazo izay lesoka izay mahatonga ny aretina sy ny fiainana an-tany, ny fitiavana-baikoina ? Nahoana [...]
Ny famotehana: ny lalàna tsara indrindra avy amin'ny satroka ambony nataon'i Ronald Plasterk!
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 12 Jolay 2017	• 16 Comments
Fantatrao fa ilay minisitra miara-miombom-pihetseham-po, izay niova tampoka avy amin'ny tsy hita maso sy ny mpandahateny tao Buitenhof ho Minisitry ny Fanabeazana, ny Kolontsaina sy ny Siansa ao amin'ny Kabinetra Balkenende IV. Ny Ronald Plasterk tsara tarehy sy mahafinaritra angamba dia mety ho fantatry ny orony sy ny tarehiny. Indraindray izy dia mitafy kapa misompirana ary [...]
'Horizon Zero Dawn' avy amin'ny orinasam-pihetseham-baolina am-bisikileta Amsterdam Guerrilla Games 1e manoloana ny zava-misy marina
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 11 Jolay 2017	• 6 Comments
Ny fahitalavitra VPRO Backlight naniraka tamin'ny fiandohan'ny 16 2017 ny fandaharana mitondra ny lohateny hoe "Ny ao amin'ny lalao. Anaram-baovao voafidy, satria ny fanadihadiana dia ohatra tsara amin'ny fomba manerana izao tontolo izao dia miha-mitombo ny isan'ireo olona an-tapitrisany maro amin'ny lalao. Ireo lalao ireo dia manjavona kokoa ary efa niova tsikelikely avy amin'ny 'linear', [...]
Torkia sy Iran, famelezana ara-paminaniana an'i Israely sy ny sarintanin'ny lalambe mankany amin'ny governemantan'ny governemantan'ny Luciferiana
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 27 June 2017	• 32 Comments
Talohan'io dia nanamarika aho fa ny faminaniana ara-pivavahana dia karazana script amin'ny zava-misy iainantsika. Nambarako ihany koa fa i Torkia dia manatanteraka ny anjara asan'i Magog ary ny filoha Erdogan dia ny Goga avy any Magoga araka ny voalaza ao amin'ny bokin'ny Ezekiela (jereo eto). Alohan'ny handao anao ary eritrereto hoe: "Oh no [...]
Ny aterineto, ny hazo fahalalana, ny Apple & ny fiainana mandrakizay
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 3 June 2017	• 3 Comments
Nicholas Copernicus nanoratra araka ny tantarantsika tamin'ny 1543 taorian'ny Kristy fa ny Masoandro no ivon'ny rafi-masoandro ary ny tany dia planeta iray izay niova manodidina ny masoandro. Tena nanaitra izany fisainana izany tamin'ny fotoana nanazavany ny fanoratana ny asa lehibe momba ny astronomia sy ny [...]
Ny vanim-potoanan'ny aquarius, ny vanim-potoana vaovao ary ny lamina vaovao iraisam-pirenena
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 29 Desambra 2016	• 19 Comments
Ramatoa Helena Petrovna Blavatsky raha ny marina ny mpanorina ny New Age hetsika izay mampiray ny fivavahana rehetra sy ny fametrahana ny fitondram-panjakana 1 tontolo izao no dingana tsara. Nandehandeha eran'izao tontolo izao izy mba hianatra ny fivavahana rehetra. Ity zava-misy ity dia tokony ho famantarana fa io vehivavy io dia avy amin'ny boribory mahomby, satria [...]
Nahoana ianao no manahy momba ny tsy rariny rehetra eto amin'izao tontolo izao?
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 11 September 2016	• 2 Comments
Nahoana ianao no manahy momba ny tsy rariny rehetra eto amin'izao tontolo izao? Izany no fanontanian'ny olona maro. Izany matetika dia nanampy hoe hitondra voka-dratsy ho anao izany. Ny olona sasany koa dia mino fa mamorona ny zava-misy iainanao ianao, ka raha mifantoka amin'ny tsy rariny ianao dia [...]
Ny fanontaniana lehibe momba ny fivavahana: Iza marina no Andriamanitra ary iza i Satana?
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 14 Desambra 2015	• 12 Comments
Ao amin'ny fanehoan-kevitra maro avy amin'ny mpamaky no nanontaniako ny antony ilazako betsaka momba an'i satana? Raha misy an'i Satana, tsy maintsy misy koa Andriamanitra ve? Ho an'ireo mpamaky izay ao amin'ity tranonkala ity dia ho fanontaniana tsy misy dikany izany. Ny traikefan'izy ireo dia mety tsy misy andriamanitra mihitsy ary ny zava-drehetra dia [...]
Ny fiakarana Magic iray amin'ny fampiasam-bola Google dia mampifangaro ny zava-misy sy ny zava-misy
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 26 Oktobra 2015	• 2 Comments
Ny herinandro lasa teo dia niresaka momba ny fahafahana miaina ao amin'ny tontolo virtoaly iray aho, izay nametrahako ny fijerena siantifika, toy ny famaritana ny universe miaraka amin'ny teoriatre string (teoretika) izay mitovitovy amin'ny codecode (jereo eto). Niresaka ihany koa aho ny mety hisian'ny simulation ao anaty simulation. Ity dia tsara indrindra amin'ny [...]
Filed in filozofia	by Martin Vrijland	amin'ny 20 Oktobra 2015	• 27 Comments
Ao amin'ny lahatsoratra momba ny fiteny hebreo, nanazava ny fomba fiasan'ny rindrambaiko rehetra izao tontolo izao. Tsy izaho no voalohany ary iray ihany no miantso izany, na ny astrophysiste ary ny mpandresy nahazo loka Nobel George Smoot dia miahiahy io fanontaniana io. Na dia nilaza aza izy tamin'ity fampisehoana TED ity fa "kely [...]
Total visits: 14.663.875